Utu breeki mkpụrụ osisi oyi - esi esi nri | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Ihe na 04.11.2019 04.11.2019
Utu breeki mkpụrụ osisi mmanya - esi eme
N'oge udara, ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ ụlọ nwere ike izipu tomato dị mma ka ha kwụsị - maka nchekwa ruo mgbe oyi. Site na ebuka ị nwere ike ime mmanya na-egbu egbu nke ị nwere ike ịbanye n'ime ezumike.
Ihe ọ drinkụ turnsụ ahụ na-atọ ụtọ, viscous, nụchara anụcha ụtọ, nke na-egosipụta onwe ya nke ọma ọ bụrụ na ị tinye ice na mkpisi n’elu ya mgbe ị na-eje ozi pawuda.
Ihe ọ raspụ raspụ na-egbu egbu n'ime ụlọ nwere ike ịbụ ezigbo ihe dị mma maka ọtụtụ aperitifs na cocktails. Dịka ọmụmaatụ, na Afọ Ọhụrụ ị nwere ike itinye ya na champeenu, ị na - enweta uto nke ị na - atụghị anya ya ọzọ - ezigbo anwansi! A mee mmanya na-egbu egbu n’ụlọ dị nnọọ mfe.
Ị ga - achọ:
Ngwurugwu 2. mmiri;
2 tojupụtara shuga
800 g nke friza friza (esi nri ya na oge ọkọchị);
1/4 tojupụtara ihe ọ juiceụ lemonụ lemon;
6 tojupụtara vodka.
Etu esi esi nri Rasberi - ihe eji eme ulo
1. Wụsa raspberries ozugbo site na friza (thaw no!) Yet n'ime ite. Afanyekwa ọnụego ọgwụ ọ fromụ fromụ si lemon. Gburugburu vodka. Jiri nwayọ gwakọta ya na spatula na aka dị ogologo.
2. Mechie ite ahụ ma tinye ya na nkuku dị mma na ọchịchịrị ruo otu izu. Mkpa anwụ zuru oke dị mkpa!
3. Ekem, dị ka usoro ntụrụndụ maka ihe ọ raspụ raspụ na-egbu egbu dị n'ụlọ, tinye sirop shuga na nnukwu nke izu nke abụọ: jikọta akụkụ mmiri na shuga, okpomoku, na-akpali akpali mgbe niile, mana ọ bụghị esi. Mgbe sirop ka mma, tren ka tomato.
4. Ihe ọ Homeụụ na-egbu egbu site na raspberries, kpọnwụrụ ma hapụ otu ebe maka izu abụọ ọzọ. Echefula na ite nke ihe ọ drinkụ needsụ ahụ kwesịrị ịma jijiji - otu ugboro kwa ụbọchị abụọ ga-ezu.
5. Ugbu a hichaa mmanya vaịn ugboro abụọ site na okpukpu atọ nke ọgwụ gauze ma wụsa n'ime karama mara mma. Ihe anwansi a drinkụ dị njikere!
Anyị nwere olile anya na anyị zara ajụjụ a n’ụzọ zuru ezu - Otu esi eme ka mkpokọ mmanya nke breeki si na friji, ma ọ bụrụ na ọ bụghị - lelee Ntụziaka vidiyo!
Ego si na onye meriri emeri nke "Ememe oke"
Osisi Raspberry Instant Liquor
Ihe na nri na nri
Ajuju 23 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,338.